बसन्त थापा 8 months ago
डा. अम्बरिश पोख्रेल- समस्या नं १: धेरै वर्ष पछि (चालीसको दशक पछि अहिले) कार्तिक महिनामा मुसलधारे पानी पर्यो, केही किसानहरूको काटेको धान नराम्रोसँग भिज्यो मात्र होइन पानीमा ढाडियो ।
समाधान: केही दिन घाममा सुकाउनुस कृपया । सक्किगो नी । यही हो नेपाली किसानको समाधान।
समस्या नं २: उखु किसानले चार पाँच वर्षदेखि उखुको मूल्य बुझ्न पाएका छैनन् । तर उखु व्यापारीहरु (मिल मालिक) अमूक ठूला ठूला पार्टीका सांसदहरु छन् । चिनी व्यापारीहरुको पछाडि प्रशासन, नेता र चन्दा असुली गरिसकेका ठूला पार्टीहरु छन् । एक जना माइती घर मण्डलमा धर्ना दिन आएका किसानको मृत्यु समेत भयो। उनको मात्र दश लाख रुपैयाँ बाकी रहेछ !
समाधान: वर्षौ वर्ष किसानहरुलाई उनीहरूको पैशा ठगेरै (नदिएर) निराश बनाउने, अनि त्यो पैसा माया मार्न बाध्य पार्ने । यसरी नेपालमा कसैले पनि अरूको मानवीय संवेदनाको ख्याल समेत गर्ने वाला छैन । आफैले आफैलाई जबर्जस्ती बलियो बनाएर राख्नु वाध्यता छ ।
समस्या नं ३: कम्तीमा पनि विगत तीस_ बत्तीस वर्ष देखि नेपाल झन् पछि झन् आर्थिक रूपमा जर्जर अवस्थाबाट गुज्रँदै छ । रोजगारी माइनस तीर झरेको झरी छ । पचासौ लाख युवाहरु खाडी देखि कोरियसम्म कुल्ली रूपमा जान बाध्य पारिएको छ ।
समाधान: अर्को तीस बत्तीस वर्ष कुर्नुहोस्, कोही न कोही सपुत आउला (जन्मे ला) र देश निर्माणको महा अभियान सुरु गर्ला नी । अनि माथिका प्रतिनिधि घटनाहरू सम्बोधन गर्ने छ राज्यले । हाम्रो छोरा वा नातिको पाला ?
October 20, 2021 11:38 am | विचार/ब्लग, विचित्र संसार, विविध